Yakachipa SBB Chitima Tiketi Uye Yekufamba Nzira Nzira Mitengo | Chengetedza Chitima
Zvitima zveSBB zvinotaridzwa kumusoro kwenzira dzenyika dzezvitima muEurope, uye mukati 2017 yakarongedzwa kutanga kune yavo yemhando yebasa, kuchengetedza chinzvimbo, uye performance index.
SBB chitima sevhisi ndeimwe yeanonyanya kubata nguva masevhisi epasi, nezvishoma pane 3 maminetsi kunonoka paavhareji.
Yakareba kwazvo SBB mugero wechitima, iyo Gotthard Base tunnel, mu Vadivelu Comedy Swiss Alps, matanho 57.1 makiromita uye inogadzira rekodhi repasirese.
SBB zvitima vari kudiwa zvakanyanya, uye chete 2 mamwe makambani enjanji semakwikwi, ivo parizvino vanoramba vari sarudzo yepamusoro yezvitima muSwitzerland. Ivo vanokwanisa kukwanisa kumisa zvitambi zvechitima senge izvo zvavanazvo zvinorambidza kuchinjanisa matikiti kana kudzoserwa kunze kwekunge iri iro Bhizinesi remhando yetikiti.. Kunyangwe paine mamwe mawebhusaiti maunogona kutengesa matikiti ako echipiri ruoko kuvanhu, SBB haibvumire kutengesa-kwechipiri-tikiti kutengesa. Izvi zvinokubatsira sei kuchengetedza mari? Ronga tikiti rako chete kana uine chokwadi nezvechirongwa chako chinogona kukuchengetedza kubva kubhuku rimwe chete tikiti nekuti chimwe chinhu chakauya uye haugone kushandisa litikiti rekare.
1) Iwe Unosvika pa Guta Center. Iyi ndiyo imwe mukana weSBB zvitima kana ichienzaniswa nendege. SBB zvitima uye zvese zvimwe kufamba kwechitima kubva chero kupi muguta kusvika pakati peguta rinotevera, hazvina basa kana iri kuchengetedza nzvimbo kana musha. Izvo zvinokuchengetedza iwe nguva uye mutengo wekeji kubva kuairport kuenda kuguta. Nezitima zvinomira, zviri nyore kuti uende chero kupi zvako muguta rauri kuenda. Hazvina basa kuti uri kubva kupi uchibva, Geneva, muBasel, Zermatt, kana Zurich, Guta rinomira pakati ibasa rakakura rezvitima zveSBB!
Kuti utore yako SBB uye ive chaiyo panguva, iyo njanji inokurudzira kuti iwe unosvika 1 awa Chitima chako cheSBB chisati chasimuka. Isu paSave A Chitima kubva patakafamba zvakanyanya pazvitima zveSBB, kukurudzira kusvika 30 maminitsi pamberi, saka haufanire kumhanyisa nepakati pezviteshi zvechitima kuti ubate chitima. Pamusoro pe, awa inguva yakakwana kukwana kuti unakirwe nezvitoro nemastands echikafu uye uwane izvo zvinhu zvaunoda zve rwendo rwechitima kuti uve wakasununguka sezvinobvira.
Kana iwe wakaverenga kusvika panguva ino, unoziva zvese zvaunoda kuti uzive nezve ako SBB zvitima uye vakagadzirira kutenga yako SBB chitima tikiti pa Chengetedza Chitima.